Avo veCupertino vanotangisa beta 2 yewatchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5 yevagadziri | Ndinobva mac
Iyo yechipiri beta ye watchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5 izvozvi zviri mumaoko evanogadzira. Nezuro chete Apple yakaburitsa beta vhezheni ye macOS High Sierra yevagadziri uye nhasi isu tatova nemamwe ese maBhaibheri aripo, kusanganisira iOS 11.2.5.
Sezvinowanzoitika mushanduro dze beta dzakaburitswa neApple, hatiwane mutsananguro shanduko dzinoitwa mushanduro idzi asi zviri pachena kuti vanotsanangura izvo kugadzikana kwehurongwa uye kugadzirisa kwekuchengetedza zvinowedzerwa, pamwe neyakajairika bug fixes kubva kare vhezheni.
Hatina kukahadzika pamusoro pekuvandudzwa kwakaitwa mune beta vhezheni dzakaburitswa kune vanogadzira, asi zviri pachena kuti vashandisi vanoda shanduko dzinoonekwa kana dzinoshanda pamidziyo yavo uye hapana kana chiratidzo chekuchinja uku parizvino. Kana shanduko dzikaonekwa mune izvi, isu tinozozvitsikisa zvakananga muchinyorwa chino. Rangarira kuti aya ma beta shanduro dzevanyoreri vanogadzira uye nekudaro hazvikurudzirwe kuti uzviise pamidziyo yatinoshandisa mazuva ese. Zvakare rangarira kuti iyo Apple Watch haina sarudzo yekudzokera kune yapfuura vhezheni, saka kuisa beta vhezheni zvinoreva kuti isu tinofanirwa kutsungirira kusvika pakaburitswa yekupedzisira yepamutemo vhezheni.
Apple inoenderera pamwe nekuvandudzwa kweTVOS uye watchOS pamwero wakaenzana nemamwe masisitimu anoshanda, mune kesi yeWOSOS hatina beta yeruzhinji asi mu macOS, iOS uye tvOS isu tine sarudzo yekumisikidza iyi yeruzhinji beta chero bedzi isu takanyoreswa muchirongwa chekuvandudza. Kunyangwe izvi, kurudziro yangu ndeyekugara kunze kweshanduro dze beta kuitira kuti vawedzere kukundikana kana kusapindirana nematurusi edu kana kunyorera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Cupertino inotangisa beta 2 yewatchOS 4.2.2 uye tvOS 11.2.5 yevagadziri